Holland: magaalo casri ah oo aan baabuur lagu wadan! Xayawaan Welibana Uu Hooy Leeyahay.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Holland: magaalo casri ah oo aan baabuur lagu wadan! Xayawaan Welibana Uu Hooy Leeyahay..
Published: October 13, 2016, 1:47 pm
(0) Comments Magalaada Houten ee dalka Holand ayaa ah mid ka mid ah magaalooyinka aduunka ugu amniga wanaagsan. Magaaladan ayaa sanadkii 1980 ku dhiirigelisay 4 kun oo ka mid ah muwaadiniinteeda inay isticmaalaan baaskiiladaha, halkii ay ka adeegsan lahaayeen baabuurta.
Markii arinkaasi la hirgeliyay wax yar ka dib waxa magaalada laga waayay qof baabuur wata dhamaantood waxay isticmaaleen baaskilado dadka degani. Magaladaasi ayaa ilaa maanta sidaasi ah oo aan laga isticmaalin baabuurta.
Dhinca kalena dalka Holand waa dalka keliya ee aan laga helayn xayawaan bilaa guri ah, Eyda iyo bisadaha dhamaantood waxay leeyihiin hoy iyo guryo.
Arintaasi waxay dawladdu uga dan lahayd inay hirgeliso xeerka daryeelka xayawaanka. Waana dalka keliya ee dunida uu xayawaanku ugu nool yahay si raaxo leh. Maxaad ka filaysaa muwaadinkooda?
« Warbixinta Ka HoreysayHabab Cusub Oo Aad Iskaga Ilaalin Karto Cudurka Macaanka Noociisa Labaad	Warbixinta Xigto »Kaneecadda Oo La Ogaaday Inay Kala Saari Karto Qofka Xanuunsan Iyo Ka Caafimaadka Qaba..	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Leave a Reply Cancel reply